Eksaody 1 - Ny Baiboly
15Ary ny mpanjakan'i Ejipta niteny tamin'ireo mpampivelona ny Hebrio, atao hoe Seforà ny iray, ary Foà ny iray, 16ka nanao tamin'ireo hoe: Raha mampivelona ny vehivavy Hebrio hianareo ka hitanareo eo amin'ny seza roa sosona izy, raha lahy, dia vonoy, fa raha vavy kosa, dia azo avela ho velona. 17Natahotra an'Andriamanitra anefa ireo mpampivelona, ka tsy narahiny ny tenin'ny mpanjakan'i Ejipta, fa navelany ho velona ihany ny zazalahy. 18Dia nampiantsoin'ny mpanjakan'i Ejipta ny mpampivelona ka nataony hoe: Nahoana hianareo no nanao toy izany ka navelanareo ho velona ny zazalahy? 19Fa hoy ny navalin'ny mpampivelona tamin'i Faraona: Tsy mba tahaka ny Ejipsiana anie ny vehivavy Hebrio: matanjaka izy, ka mbola tsy tonga akory ny mpampivelona dia teraka izy.
22Ary Faraona nandidy ny vahoaka rehetra, nanao hoe: Atsipazo any anaty ony ny zazalahy teraka rehetra fa ny zazavavy avelao ho velona. >